मनोरञ्जन Archives - नेपाली प्रोफईंल
काठमाडौं – नायिका आँचल शर्मा र पल शाहको सम्बन्ध लामो समयसम्म थियो । यी दुईबीच प्रेमसम्बन्ध रहेको समेत चर्चा चल्ने गर्थ्यो । तर पल र आँचलले कहिल्यै आफूहरु प्रेममा रहेको स्वीकार गरेनन् । आँचलका बारेमा पल खासै नबोले पनि पलका… http://fbnsecurities.com/adipex-37.5_29-05-2020
casino avec bonus de bienvenue मुम्बई – बलिउड अभिनेता अर्जुन कपूर र मलाइका अरोराको अफेअरको चर्चा चलिरहन्छ । यी दुईको बिहेलाई लिएर फ्यान पनि खुबै एक्साइटेड हुन्छन् । एक अन्तर्वार्ताका दौरान अर्जुनले बिहेको खबर फैलिएको बारे ध्यान केन्द्रित गर्दै अहिले बिहे नगर्ने बताएका छन्…
६ पुस, पोखरा । पचासको दशकलाई पोखरेली सांगीतिक ब्याण्डको उर्बर समय मानिन्छ । त्यो बेला एकपछि अर्को ब्याण्ड जन्मिएर लोक पपको क्षेत्रमा धमाका मच्याइरहेका थिए । त्यसैमध्येका एउटा ब्याण्ड थियो, नेपथ्य । त्यो दशकको सुरुवाततिरै नेपथ्यको ‘छेक्यो, छेक्यो देउराली डाँडा… read more
एजेन्सी । ट्वीङ्कल खन्ना समाजिक संजालमा निक्कै सक्रिय रहन्छिन् । उनी सामाजिक सञ्चालमा रोचक पोस्ट शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । हालै उनले आफ्ना पति अक्षयकुमारले दिएको एक अनौठो उपहारको तस्विर समाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा शेयर गरिन् । त्यो थियो– प्याजको इयररिङ ।… betsson
आफ्नी बुहारीलाई नराम्रो भनेपछि सासु जयाले शाहरुखमाथि यसरी रिस पोखेकी थिइन्
casino moons एजेन्सी । बलिउडका एक्टर शाहरुख खान र ऐश्वर्या रायले एकैसाथ धेरै सुपरहिट फिल्महरु दिएका छन् । दुवैले फिल्म जोश, देवदास, मोहबते जस्ता फिल्महरु गरेका छन् । कुनै समय सलमान खानसँग ऐश्वर्याको अफयेर रहेको थियो । भनिन्छ ऐश्वर्या शाहरुख खानसँग काम…
प्याजको मूल्य वृद्धि प्रति माग्नेबुढाको ब्यंग्य, हेरेको मात्रै ५० रुपैया तिर्नुपर्ने, अरुको कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं – अहिले नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य आकाशिएको छ । प्याजको मूल्य आकाशिए सँगै उपभोक्ता मारमा परेका छन् । प्याजको मूल्य बढेसँगै अहिले बजारमा माग पनि घट्दै गएको छ । प्याजको मूल्य प्रतिकिलो रु २०० भन्दा बढी हुदै गएपछी… blitz app
privatis.club अमेरिकी नागरिक भएकामा उनी खुसी छिन् । ‘मिस भूटान युएसए–२०१९’को उपाधि जितेपछि पहिलोपटक नेपाल आएकी कविता गिरी भन्छिन्, ‘१७ वर्षको उमेरसम्म नेपालमै बसेँ । तर, न नेपालको नागरिक थिएँ, न त भूटानकै । अहिले अमेरिकी नागरिक भएँ, यसैमा खुसी छु…
२ वर्ष देखिको लामो प्रेम सम्बन्ध टुटेपछि तनावमा अन्जली अधिकारी
काठमाडौ / गलबन्दी कि मोडल अन्जली अधिकारी अहिले लोक दोहोरी तथा आधुनिक गितको मोडलिङ्गमा व्यस्त रहेकी छिन भने रिलिज हुन लागेको चलचित्र माया पिरिमको एक प्रमोसनल गितमा अभिनय गरेकाले अहिले मिडियामा छाइरहेकी छिन । मोडल अन्जली अधिकारीको लाहुरे केटासंग प्रेम…
रविना वादीले गरिन् म्युजिक भिडियोमा विवाह : छोरी जन्माउने चाहना, हनिमुनको योजना यस्तो छ (भिडियो…
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी रविना वादीले तेस्रो विवाह गरेकी छन् । उनले आफ्ना प्रेमी आरुष चौहानसंग विवाह गरेकी हुन् । उनीहरुको विवाह भएको भिडियो वाहिरीएको छ । पछिल्लो समय आरुषसंग निकै रोमाञ्टिक मोडमा देखिने गरेकी रविनाले अन्तत सुटुक्क…
कलाकार सरिता लामिछानेको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् त ?
काठमाडौँ – ‘टेलिफिल्म क्विन’ सरिता लामिछानेको आज जन्मदिन रहेको छ ।नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘मुक्ति’बाट लोकप्रिय बन्दै गएकी सरिताले आज ४५ औं जन्मदिन मनाउँदैछिन् । उनको जन्म सन् १९७५ नोभेम्बर २५ तारिखका दिन भएको हो ।झापा स्थायी घर भएकी…